'चीनमा सबै उमेर समूहका मानिसबीच चस्मा लगाउने प्रवृत्ति आम छ,' अध्ययनपछिको लेखमा उल्लेख छ, 'वुहानमा डिसेम्बर २०१९ ताका व्यापक मात्रामा कोरोना फैलिएकै बेला हामीले अस्पतालहरूमा चस्मा लगाउने थोरै बिरामी मात्र देखेका थियौं।'
अहिलेको यो अध्ययन भने 'जामा अप्थाल्मालोजी' ले प्रकाशन गरेको हो। यसमा जोन हपकिन्स स्कुल अफ मेडिसिनकी संक्रामक रोग विशेषज्ञ तथा मेडिसिनका एसोसिएट प्राध्यापक डा. लिसा मारागाकिसको संलग्नता थियो। उनले यो अध्ययनको नतिजा परिभाषित गर्ने बेलामा सावधानी अपनाउन अनुरोध पनि गरेकी थिइन्।
'यो एउटा अध्ययन हो,' डा. मारागाकिस भन्छिन्, 'त्यसै पनि हामीले स्वास्थ्य हेरचाहका निम्ति सावधानी अपनाउने बेलामा फेस-सिल्ड वा गगल्स लगाउनु उपयुक्त देख्दै आएका छौं। यो अवस्थामा चस्मामा केही आधार पनि छन्।'
अमेरिकाको आँखासम्बन्धी अध्ययन संस्था 'अमेरिकन एकेडेमी अफ अप्थाल्मोलोजी' का प्रवक्ता तथा क्लेभल्यान्डस्थित मेट्रो हेल्थ मेडिकल सेन्टरका आँखासम्बन्धी प्राध्यापक डा. थोमस स्टेनम्यानका अनुसार निष्कर्षमा पुग्नुअघि यसबारे फरक घेरामा गएर अझ बढी अध्ययन जरूरी छ।
'यो अत्यन्तै रोचक र थप बुझ्नका निम्ति उत्सुकता जगाउने विषय हो,' डा. स्टेनम्यान भन्छन्।
'हो चस्मा लगाउँदा कसैलाई कुनै हानी हुँदैन। तर के सबैले त्यसलाई लगाउनै पर्ने जरुरी छ? सायद छैन,' उनी भन्छन्, 'आँखा जोगाउन चस्मा वा फेस सिल्ड लगाउने आह्वान गर्नुअघि यसको व्यवहारिक पक्ष हेर्न जरुरी छ। कुनै कुनै पेसामा आवद्ध विशेषगरी बच्चा–बुढाबुढी वा बिरामी हेरचाह गर्नेले चाहिँ यो सुरक्षा उपाय अवलम्वन गर्दा राम्रै हुन्छ।'
(द न्यूयोर्क टाइम्सका लागि तारा पार्कर पोपले लेखको स्टोरी हामीले भावानुवाद गरेका हौं)